पथरीमा सीएम कन्दङ्वा प्रतिभा पुरस्कारको घोषणा - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
पहिलो पटक गायक एलपी जोसी र साहित्यकार धनकुटे कान्छालाई प्रदान गरिने
मोरङ । मोरङको पथरीमा स्थायी बासिन्दा शिक्षासेवी, साहित्यकार चन्द्रमान (सीएम) कन्दङ्वाको स्मृतिमा बार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने गरी दुई पुरस्कार स्थापित भएको छ । स्थापित भएको पहिलो पुरस्कार लोक गायक एलपी जोशी र साहित्यकार धनकुटे कान्छालाई प्रदान गरिने भएको छ । सी.एम. कन्दङ्गा प्रजान्त्र प्रेमी राजनीतिक कर्मी समेत थिए ।
कन्दङ्वाको छोरो रविन कन्दङ्वाले सीएम कन्दङ्वा स्मृति कोष स्थापना गरेको आज (सुक्रबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । पुरस्कार वैशाख २६ गते साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गरिने जानकारी गराएको छ । पुरस्कार कोषको अध्यक्ष गायक रविन कन्दङ्वाले पहिलो पटक ५० हजार राशीको राष्ट्रिय विशिष्ठ प्रतिभा सम्मान लोकगायक एलपी जोशीलाई र ३५ हजार राशीको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान धनकुटेलाई प्रदान गरिने निर्णय भएको जानकारी गराए ।
गायक जोशी र सहित्यकार धनकुटे झापाका हुन् । सीएम कन्दङ्वाले २०४३ सालमा पथरीशनिश्चरेमा पहिलो निजी विद्यालय एभरेष्ट स्कुलको स्थापना गरेका थिए । सो स्कुल हाल १२ कक्षासम्म पढाइ हुदै आएको छ । विद्यालय प्रदेशकै उत्कृष्ट रहेको स्कुल सञ्चालकको दावी रहदै आएको छ । सीएम कन्दंगवाको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर वर्षेनी पुरस्कार प्रदान गर्न ५ लाखको कोष खडा गरेको छ स्कुलका निर्देशक समेत रहेका रविन कन्दङ्वाले बताए । प्रदेश नम्वर १ का भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, खेलकुद, पत्रकारिता, चिन्तन, समाजसेवा क्षेत्रका २ व्यक्तित्वलाई वर्षेनी पुरस्कार प्रदान गर्दै जाने अध्यक्ष रविनले बताए । यस वर्षको पहिलो कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशका प्रतिनिधि साहित्यकारका रचन समेत प्रस्तुत हुनेछ । कम्युनिष्ट विचारमा आस्था राख्ने सीएम कन्दङ्वा विस. १९८५ चैत २९ गते भारतको दार्जिलिङमा जन्मेर २०६२ फागुन २५ गते पथरीशनिश्चरेमा निधन भएको थियो । कन्दङ्वाको ४ कृति प्रकाशित छन् ।
Published On: Friday, May 3, 2019 Time : 11:35:48 1130पटक हेरिएको